Yini engcono: Phosphogliv noma Essliver forte? Ukubuyekezwa > Ukwelashwa nokuvimbela
I-Phosphogliv noma isifaki okuyinto engcono
Ngezifo zesibindi, odokotela bavame ukunquma i-hepatoprotectors - ama-ejenti avikela amaseli wesibindi futhi asheshise ukululama kwabo. Leli yiqembu elinezidakamizwa elinokusizakala elihlukile ekwakhekeni nasekwenziweni kwento.
I-Phosphogliv iqukethe i-phosphatidylcholine, efakwe engxenyeni yamangqamuzana esibindi futhi ibuyise ubuqotho babo, kanye ne-glycyrrhizinate, ehlisa ukuvuvukala futhi ivimbele ukuphindaphindeka kwamagciwane.
I-Essliver forte ifaka ama-phospholipids agcina ukwakheka okuvamile kodonga lweseli futhi alawule ukuqina kwayo, kanye nokuqina kwevithamini okwenziwa ngendlela ejwayelekile izinqubo ze-metabolic esibindini.
i-hepatosis enamafutha (ukwanda ngokweqile kwezicubu ze-adipose esibindini),
ukulimala kwesibindi okunobuthi (kufaka phakathi izidakamizwa notshwala),
i-virpatitis hepatitis (ukuvuvukala kwesibindi),
i-cirrhosis (ukufakwa esikhundleni samaseli wesibindi ngezicubu ezihlobene nokulahleka kwayo yonke imisebenzi yawo),
i-psoriasis (isifo sesikhumba esiqhubeka nokuncipha kwekhono lesibindi sokukhipha isibulala-zinambuzane ezinobuthi).
i-hepatosis enamafutha kanye nokulimala kokudla kwamafutha esibindini,
i-hepatitis yemisuka ehlukahlukene (i-viral, enobuthi),
ukulimala kwesibindi ngaphansi kwethonya lokuvezwa kwemisebe,
hypersensitivity kuzakhi zomuthi,
i-antiphospholipid syndrome (isifo se-autoimmune lapho umzimba ukhiqiza khona amasosha omzimba abulala ama-phospholipids).
Kuya ku-Essliver Fort:
ukungabekezelelani komuntu ngamunye kwizakhi zesakhiwo somuthi.
I-Phosphogliv noma i-Essliver forte - okungcono?
Indlela yokusebenza yale mishanguzo icishe ifane, ngakho-ke, izinkomba zokusetshenziswa kwazo cishe ziyefana. Kodwa-ke, kunokwehluka okuningi ekubekezelelekeni. I-Essliver forte, ngokungafani nePhosphogliv, ivunyelwe kwabesifazane abakhulelwe nabambekile, kanye nezingane. Empeleni akubangeli imiphumela emibi, kepha kuvame kakhulu ukucaphukisa ukungahambi kahle komzimba ngenxa yamavithamini we-B afakiwe ekwakhiweni kwawo, okuyizinto ezinokungezwani nezinto komzimba kakhulu.
Ngaphandle kwalokhu umehluko, i-Phosphogliv ingumuthi onokwethenjelwa: yadalwa ngokuya ngamazinga ase-Europe, icwaningwe kahle futhi ifakiwe ohlwini lwezidakamizwa ezibalulekile. Ngenxa ye-glycyrrhizic acid, enomsebenzi we-antiviral, leli khambi lisebenza kangcono nge-hepatitis yegciwane. Ngaphezu kwalokho, i-Phosphogliv ingalawulwa ngokuqondile ngesixazululo, kubalulekile ezigulini ezisesimweni esibucayi.
I-Phosphogliv noma i-Essliver forte - okungcono, ukubuyekezwa
Ukubuyekezwa kweziguli ngalezi zidakamizwa kwehluka kakhulu. Bobabili uPhosphogliv no-Essliver banenombolo enkulu yabaxhasi abaphawula ukusebenza kwabo okuphezulu. Kodwa-ke, ezinye iziguli zibonisa ukuthi akekho noyedwa wabasizi be-hepatoprotectors abasizile. Lokhu mhlawumbe kungenxa yobucayi benkambo yesifo kanye nokwanda kwesiguli.
Ukufingqa ukubuyekezwa kwezidakamizwa, ungakhomba amaphethini alandelayo ngayinye yazo.
umphumela omuhle we-hepatitis yegciwane,
ukuba khona kohlobo olunamandla lokukhishwa,
ukuthi kungenzeka ukutholakala mahhala, ngoba umuthi ufakiwe kuhlu lokubalulekile.
ukwenqatshelwa kokusebenzisa ngesikhathi sokukhulelwa, ukukhipha umzimba, ekuziphatheni kwezingane.
Ukubuyekezwa kwe-Essliver forte
intengo engabizi kakhulu
uhlu oluncane lwe-contraindication
ukubekezelela okuhle okwenziwa yizinhlelo zokugaya nokuhlinza kwenhliziyo.
indlela yokukhululwa kuphela
ukusabela okwenziwa njalo kwevithamini B
Kufanele uhlale ukhumbula ukuthi udokotela kufanele anqume ukwelashwa nokuthi ukhetha umuthi esimweni ngasinye uhlala kuye.
Okubalulekile yi-hepatoprotector enhle kakhulu. Isetshenziselwa ukwelashwa kanye nokuvikela izifo eziningi. Kumakhemisi kune-Essentiale yasendulo, i-Essential Norte, i-Essential Forte, izintengo ezibalulekile ze-Fort N. Izidakamizwa ziyehluka kuhla lwama-ruble angama-800- 2300.
Ukulungiswa kwalolayini kuyatholakala ngesimo samakhompiyutha nesixazululo. Umenzi we-hepatoprotector yiSanofi-Aventis. Ukwakheka kwe-classic Essential kubandakanya ingxube yama-phospholipids abalulekile, amavithamini B6, B12, B3, B5. Okubalulekile kwe-H ne-Essential Fort N kuqukethe ama-phospholipids kuphela. I-Essential Forte iqukethe ama-phospholipids, amavithamini B6, B12, B3, B1, B2, E.
Imiphumela yokwelapha ye-hepatoprotector:
Ivimbela ukukhula kwe-fibrosis.
Ibuyisela amandla i-lipid metabolism, ngenkathi yehlisa i-cholesterol yegazi.
Ibuyisa ukwakheka kwama-membrane amaseli wesibindi.
Ijwayelekile ukugeleza nokuvela kwe-bile.
Kwandisa ubungqabavu bezakhiwo zamaseli.
Ijwayelekile ukugeleza kwegazi kwendawo.
Ijwayelekile ukukhiqizwa kwamaprotheni nama-enzyme wesibindi.
Yehlisa ubukhulu be-necrosis.
Ikhipha ukungena kwe-hepatocyte okunamafutha.
Kwandisa izitolo ze-glycogen esibindini.
Ngaphezu kwalokho, i-Essentiale ilungele abanesifo sikashukela, iguqule ngokweqile futhi inciphise ukubonwa kwegazi, incibilikisa ama-cholesterol plaque ngokufaka ngokwejwayelekile izinga le-lipoprotein ephansi neliphezulu egazini.
Izinkomba zokusetshenziswa kwezidakamizwa zibandakanya i-hepatitis, ukwehluleka kwesibindi, i-cirrhosis, i-hepatosis enamafutha, i-atherosulinosis, i-necrosis yesibindi, noma i-precoma, amazinga aphezulu e-LDL kanye ne-triglycerides egazini, i-toxicosis, umsebenzi owandayo we-AsAT ne-ALAT kwabesifazane abakhulelwe, i-psoriasis, cholestasis, ukugula kwemisebe.
Okubalulekile nokuBalulekile H kuyatholakala njengesisombululo. Ihanjiswa ngaphakathi kwe-ampoules eyi-1-2 ngosuku, ezimweni ezihlukile, umthamo wenyuselwa ku-4 ampoules. Ngaphambi kwenqubo, isisombululo sihlanganiswa negazi lomuntu, ushukela noma i-dextrose. Isikhathi sokwelashwa sisuka ezinyangeni ezi-1 kuye kwezingu-3.
Kumakhompiyutha we-Essential Forte ne-Essential Fort N, umthamo ofanele ngamaphilisi angama-2-3 / izikhathi ezingama-2-3 ngosuku. Isikhathi sokwelashwa sinqunyelwe izinyanga ezintathu, kwesinye isikhathi ukwelashwa kuyaphindwa.
Contraindication: I-hypersensitivity ezingxenyeni zomuthi, ukuqunjelwa. Amakhandlela nawo awabekelwe izingane ezineminyaka engaphansi kwengu-12 ubudala, futhi isisombululo sivunyelwe ukuthi sisetshenziswe kuphela kusuka eminyakeni engu-3 ubudala.
Imiphumela emibi: ukucasuka nokuvuvukala endaweni yomjovo, ukungezwani komzimba, isifo sohudo, ukungahambi kahle esiswini.
Yini engcono i-Phosphogliv Forte noma i-Essential Forte? Iziguli zishiya ukubuyekezwa okuhlukahlukene mayelana nemithi. Kodwa-ke, iziguli zishiya ukubuyekezwa okuningi okuhle mayelana nokubalulekile. Ngokusho kwabantu, umuthi umncane kakhulu amathuba okuthi ube nemiphumela emibi, uma uqhathaniswa nePhosphogliv.
Imibono yodokotela ihlukene phakathi. Abanye odokotela bakholelwa ukuthi i-Phosphogliv isebenza kakhulu, ngoba ayiqukethe ama-phospholipids kuphela, kodwa ne-glycyrrhizic acid. Abanye abelaphi bathi i-Essentiale yenza "ukuthambisa", ngakho-ke kufanelekile kakhulu ukuyisebenzisa.
Sizokhombisa umehluko phakathi kwezidakamizwa ngokucace kakhudlwana. Ukuze wenze lokhu, sebenzisa itafula.
Isikhombisi. Phosphogliv. Kubalulekile.
Ukwakheka. I-EFL + glycyrrhizic acid. Ama-EFL + amavithamini eqembu B no-E.
Ukuthwala. Imiphumela emibi ivela cishe ku-1.5-2% yeziguli. Imiphumela emibi ivela ngaphezu kwe-1,2% yeziguli.
Amandla okusebenzisa ngesikhathi sokukhulelwa. Akukho. Yethula.
Amandla okusebenzisa ebuntwaneni. Ikhethwe kusuka eminyakeni eyi-12. Isixazululo se-Essential and Essential N singasetshenziswa ukwelapha izingane kusukela eminyakeni eyi-3.
Ukuba khona kwamafomu amaningi omthamo. Kutholakala kwifomu le-capsule kuphela. Izinhlobo ezimbili zokukhishwa - isixazululo se-intravenous kanye ne-capsule.
Intengo Ama-capsules angama-90 wePhosphogliv abiza cishe ama-ruble angama-900-1100. Esebalulekile ama-capsules angama-90 abiza ama-ruble ayi-1250-1400.
Ama-ampoules ama-5 (250 mg wezithako ezisebenzayo nge-5 ml) abiza cishe ama-ruble ayi-1200. Okubalulekile nePhosphogliv ngokungangabazeki ama-hepatoprotectors amahle kakhulu. Njengoba kungabonakala etafuleni, umuthi ngamunye unezinzuzo zako kanye nokubi kwawo. Ngakho-ke, i-Phosphogliv ishibhile futhi ine-glycyrrhizic acid ekwakhiweni kwayo.
Ngakolunye uhlangothi, i-Essentiale inokubekezela okungcono, futhi ingabhekelwa kwabesifazane abakhulelwe nababambisayo.
Uma ingekho kulezi zidakamizwa efanelekile, ungasebenzisa izifaniso zeqembu. Ngenye indlela okwazi ukwenza ngayo:
I-Essliver Forte (ama-ruble angama-350-500). Kutholakala kwifomu le-capsule. Izingxenye ezisebenzayo yi-EFL, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin E, Nicotinamide. Umuthi uyi-hepatoprotector esezingeni eliphansi eyenziwe eNdiya. Odokotela bavame ukubuzwa ukuthi i-Phosphogliv noma i-Essliver Forte - yini engcono? Ngokusho kodokotela, kungcono kakhulu ukusebenzisa umuthi waseNdiya, ngoba kubiza kancane, futhi ngasikhathi singekho ngaphansi kokusebenza kahle.
I-Resale Pro (ama-ruble ayi-1300- 1400). I-hepatoprotector enamandla yaseGerman. Kutholakala kwifomu le-capsule. Ama-phospholipids abalulekile enza izinto ezisebenzayo. Umuthi welulekwa ukuthi uphuze kubantu abaphethwe i-hepatitis, cirrhosis, isibindi esinamafutha, i-atherosclerosis, i-psoriasis, ukulimala kwesibindi esinobuthi. Ekusebenzeni kwayo, ayinciphisi kwamanye ama-hepatoprotectors.
Esikhundleni sama-phospholipids abalulekile, amanye ama-hepatoprotectors angasetshenziswa. Isibonelo, ama-bile acid (Ursofalk, Urosliv, Ursodez, Exhol), umuthi wemvelaphi yezilwane (Propepar, Hepatosan), amino acid (Heptor, Heptral, Hepa-Merz) azibonakalise ngokwedlulele.
Imithi esekwe ku-thioctic acid (Berlition, Espa-Lipon, Thioctacid) kanye ne-hepatoprotectors yemvelaphi yezitshalo, kufaka phakathi i-LIV-52, Hepabene, Silimar, Legalon, Hofitol, Solgar, imnene emzimbeni.
Izidakamizwa zeHepatoprotective zisetshenziselwa ukwelapha izifo zesibindi. Babekiwe ukuze kubuyiselwe ubuqotho be-hepatocytes futhi kusebenze umsebenzi wabo, kwandise ukumelana kwamaseli wesibindi ezintweni ezilimazayo zangaphandle. Imikhiqizo esekwe ku-phospholipid ebaluleke njenge-Essential Forte noma i-Phosphogliv, iqukethe izinto ezizihlanganisa kulwelwesi lwe-hepatocyte futhi ziyiqinise.
I-Hepatoprotector iqeda ukungasebenzi kahle kwesibindi, isiza ukubuyisa ama-membrane amaseli, ama-enzyme receptors afakwe kulolwelwesi nezinhlelo, ihlanza umzimba ubuthi nobuthi, ithuthukise ukugaya nomzimba emzimbeni.
Umuthi usekwe kuma-phospholipids abalulekile - izinto zemvelaphi yemvelo, okuyizinto zokwakha zezitho zamangqamuzana ezinsizwa nezitho zomzimba. Zisondelene ngesakhiwo izingxenye zomzimba womuntu, kepha ziqukethe inani elikhulu kakhulu lamafutha e-polyunsaturated acid adingekayo ekukhuleni okuvamile, ukukhula kanye nokusebenza kwamaseli.
Ama-phospholipids akagcini ngokubuyisela ukwakheka kwesibindi, kodwa futhi adlulisa amafutha e-cholesterol kanye nokungathathi hlangothi kumasayithi we-oxidation, ngenxa yokuthi i-metabolism yamaprotheni kanye ne-lipids ivamile.
Ukwakha kabusha amaseli wesitho, umuthi awuziqedi izici ezibangelwa yimisebenzi yomzimba ekhona futhi awuthinti inqubo yokulimala kwesibindi.
isifo sokusha kwesibindi,
okunamafutha kwesibindi okuvela kwimvelaphi ehlukahlukene,
ukulimala kwesibindi okunobuthi,
ukuphazamiseka kwesibindi, okuhambisana nezinye izifo ezithile,
njengosizo ekwelapheni i-psoriasis,
pre-, postoperative therapy,
ukuvikela ukuphindaphindwa kwe-gallstones.
Umuthi uphulwe kubantu abangabekezelelani umuntu ngamunye kwizakhi ezakha ukwakheka.
Ingasetjenziselwa ukwelapha abantwana abaneminyaka engaphezu kwe-12 nesisindo esingaphezu kwama-43 kg.
Akukho lwazi olwanele ngokusetshenziswa kwe-Essential Forte ngabesifazane abakhulelwe nababambelayo, ngakho-ke kuvunyelwe ukusebenzisa umuthi ngesikhathi sokukhulelwa nangokunamathisela kuphela njengoba kuchazwe ngudokotela kwimithamo ebekiswe kuye.
Umuthi ubekezelelwa kahle, kepha kwezinye izimo ungadala ukusabela okubi ngendlela yokuphazamiseka komgudu wesisu, ukulunywa kanye nokuqhuma kwesimo sokungabikhona komzimba.
Umthamo wokuqala wesidakamizwa kubantu abadala kanye nezingane ezingaphezu kweminyaka eyi-12 - amaphilisi ama-2 izikhathi ezintathu ngosuku. Ngenhloso yokuvimbela - 1 i-capsule amahlandla ama-3 ngosuku. Thatha ngomlomo ngokudla, ngaphandle kokuhlafuna futhi uphuze amanzi amancane. Isikhathi esinconyiwe sesifundo sokwelashwa okungenani izinyanga ezintathu.
Ngokusho kokuyalelwa kukadokotela oholayo, umthamo nesikhathi sokwelashwa kungashintshelwa kumanani amahle, kucatshangelwa uhlobo nobunzima balesi sifo, kanye nezimpawu zesiguli ngasinye.
I-Phosphogliv iphinda ivuselele ulwelwesi lwe-hepatocyte cell, ithuthukise ukusebenza kwesibindi, isuse izinqubo zokuvuvukala, isize ukuqeda ubuthi, futhi inemiphumela ye-antioxidant nemithi yokulwa namagciwane.
Ukulungiswa okuhlanganisiwe kuqukethe ama-phospholipids abalulekile kanye ne-glycyrrhizic acid ekwakhiweni, ngenxa yokuthi inomphumela oyinkimbinkimbi esibindini esithintekile, kuqeda imiphumela yezinqubo ezingezinhle futhi kuthinte imishini kanye nezimbangela zokubonakala kwazo.
I-phospholipids, ehlanganisa ukwakheka kwezakhi zamaseli nezangaphakathi, iphinda yakhe amaseli wesibindi, ivikele ama-hepatocytes ekulahlekelweni kwama-enzymes nezinye izinto ezisebenzayo, futhi ibuye ibuye i-lipid ne-protein metabolism.
I-Glycyrrhizic acid inempahla yokulwa nokuvuvukala, ikhuthaza ukucindezelwa kwamagciwane esibindini, yenyusa i-phagocytosis, ivuselela ukukhiqizwa kwama-interferon kanye nomsebenzi wamaseli wokubulala wemvelo avikela umzimba kuma-microorganisms angaphandle.
ukulimala kwesibindi okunobungozi, utshwala,
Izifo zesibindi ezivela ngenxa yesifo sikashukela,
njengendlela eyengeziwe yokwelashwa kwe-neurodermatitis, cirrhosis, hepatitis yegciwane, i-psoriasis, eczema.
Umuthi u-contraindication ku-antiphospholipid syndrome kanye ne-hypersensitivity ezingxenyeni ezakha ukwakheka. Ukusetshenziswa kwePhosphogliv akunconyelwanga ekwelashweni kwabesifazane abakhulelwe nabafaka i-lactating, izingane ezingaphansi kweminyaka eyi-12 ngenxa yokuntuleka kwedatha eyanele ekusebenzeni nasekuphepheni.
Lapho uthatha umuthi, imiphumela emibi kungenzeka ngesimo somfutho wegazi okhuphukile, i-dyspepsia, ukungahambi kahle esifundeni se-epigastric, ukungezwani komzimba (ukuqubuka esikhunjeni, ukukhwehlela, ukucinana kwamakhala, i-conjunctivitis).
Amakhompiyutha athathwa ngomlomo ngesikhathi sokudla, ngaphandle kokuhlafuna futhi aphuze amanzi amaningi. Uhlobo lokudla olunconyiwe lwabantu abadala nezingane ezingaphezu kweminyaka eyi-12 ngama-2 ama-PC. Izikhathi ezi-3 ngosuku. Isikhathi esijwayelekile senkambo yokwelapha siyizinyanga ezi-3; uma kunesidingo, njengoba kuchaziwe ngudokotela, singangezelelwa izinyanga eziyi-6.
Imithi ingeyama-hepatoprotectors futhi ibekelwe izilonda zesibindi zemisuka ehlukahlukene. Ziqukethe into efanayo - ama-phospholipids, afakwe kulwelwesi lwesitho esilimele, anikela ekuvuseleleni kwawo nasekusebenzeni okunempilo.
Zombili lezi zidakamizwa zinezindlela ezifanayo zokukhishwa: zikhiqizwa ngesimo samaphilisi, athathwa ngomlomo wonke ngokudla, nesisombululo somjovo.
Ayibekelwe ukwelashwa kwezingane ezingaphansi kweminyaka engu-12.
Ngokungafani ne-Essential Forte, i-Phosphogliv iqukethe isengezo esengeziwe ngendlela ye-glycyrrhizic acid, okuholela kumphumela oyinkimbinkimbi wesidakamizwa esibindini esonakalisiwe kanye nomphumela ophakeme kakhulu wokwelapha maqondana nokungabonisi kahle lesi sifo, kodwa kanye nezimbangela zesehlakalo saso.
Ukwakheka kwamakhemikhali kwe-glycyrrhizic acid kusondele kwi-hormone yemvelo ye-adrenal cortex futhi kunemiphumela yokulwa ne-allergic, antiviral, immunomodulatory kanye ne-anti-inflammatory. Kepha ngemithamo emikhulu nokusetshenziswa isikhathi eside, kungadala imiphumela emibi engafuneki.
Ukwakheka okugcwele kwe-Phosphogliv kunomthelela ekuphikisweni okwengeziwe kanye nengozi eyandayo yokusabela kokungezwani komzimba.
I-Essentiale inconyelwa ukusetshenziswa ngabesifazane abakhulelwe abane-toxicosis. I-analogue yayo enomphumela oyinkimbinkimbi ayinqunyelwe ngesikhathi sokukhulelwa nokukhishwa, ngenxa yokuntuleka kwedatha ekuphepheni kokusetshenziswa kuleli qembu leziguli.
Uma unikezwe umehluko kwezithako ezisebenzayo eziyinhloko, i-Essential Forte ayigulisi kahle futhi iphephe, ingasetjenziswa kumithamo emikhulu nangesikhathi sokukhulelwa, kepha ayinakho ukusebenza okusebenzayo ekwelapheni izifo zesibindi zemvelo yegciwane.
I-Phosphogliv iqukethe isakhi esengeziwe esisebenzayo, esinezakhiwo zokulwa nokuvuvukala, sithuthukisa isenzo se-phospholipids, ngakho-ke, singasetshenziswa ekwelapheni i-hepatitis ye-etiology viral, namanye ama-pathologies wesibindi.
Ukuthola imiphumela emihle ngaphandle kokubonakaliswa kwemiphumela emibi, kungcono ukubonana nodokotela ozonquma ukusetshenziswa komuthi othile, kucatshangwe umlando wezokwelapha kanye nezinkomba zomuntu ngamunye kanye nokuphikisana.
Isibindi siyisitho esibalulekile emzimbeni womuntu. Igazi lidonswa ngaleli lungu amahlandla angama-400 nsuku zonke, lilicwilisa ubuthi, ubuthi, amagciwane namagciwane. Ngaphezu kwalokho, ngesinye isikhathi izicubu zomzimba uqobo ziyahlupheka kulokhu. Isibindi sinamandla okululama ngokuzimela, kepha empilweni yesimanje kungaba nzima ukwenza. Ezimweni ezinjalo, ukuze kugcinwe umsebenzi ojwayelekile wesitho, odokotela batusa i-hepatoprotectors ekhuthaza ukusebenza kwawo futhi ikhuthaze ukululama.
Yini engcono ukuthatha nezifo zesibindi - Phosphogliv noma uCarsil? "Kungcono ithuluzi elisebenza kakhudlwana, eliphephe futhi elinokusebenza okuningi," kusho ochwepheshe. Namuhla sizocubungula umphumela wabo bese sinquma ukuthi yimuphi kubo ophumelela kakhulu futhi ophephile.
I-Phosphogliv iyi-hepatoprotector yesizukulwane esisha, yesimanje futhi engenakuqhathaniswa, ngoba ukwakheka kwayo kuvikelwe yipatent. I-Phosphogliv ihlanganisa izinto ezimbili zemvelo ezisebenzayo - i-glycyrrhizic acid nama-phospholipids abalulekile. I-Glycyrrhizic acid, etholakala empandeni ye-licorice, njengesidakamizwa esizimele ifundwe kahle ososayensi baseJapan futhi isetshenziswa njengomuthi ohlukile weSNMFC. Siyazi ama-phospholipids kusuka ekukhangiseni kwe-Essentiale forte N. Kubalulekile ukuqonda ukuthi i-Phosphogliv iyinhlanganisela yasekuqaleni yezithako ezisebenzayo ezihloliwe isikhathi eside, kepha ukuba khona kwama-phospholipids akusho ukuthi i-Phosphogliv iyikhophi elishibhile lase-Essentiale forte N.
Ukuqanjwa kanye nezici ze-Phosphogliv
Njengoba isithako esikhulu esisebenzayo siqukethe i-glycyrrhizic acid
Enye ingxenye i-phosphatidylcholine, okuyinkimbinkimbi yama-phospholipids nolwelwesi lweseli
Isusa izimbangela zokulimala kwesibindi - ukuvuvukala izicubu zesibindi
Inomphumela we-anti-fibrous (ivimbela izicubu ezijwayelekile ukuthi zingaphenduki isibazi)
Inomphumela wokuqiniswa kwe-membrane
Yehlisa ubukhulu bokuphakama kokugaya kokugula kwesibindi.
Ama-phospholipids, ngaphezu kokubuyisa umphumela kumaseli wesibindi, nawo enza umsebenzi obalulekile - athuthukisa ukumuncwa kanye nokudilizwa kwe-glycyrrhizic acid esibindini.
Umuthi ngokuyinhloko ulwa nembangela yokubhubhisa amaseli wesibindi - uvimba ukuvuvukala, okuvumela isibindi ukuthi silulame ngokushesha. I-Phosphogliv ivikela amaseli wesibindi - ama-hepatocytes - emonakalweni futhi ivimbela ukuthuthukiswa kwe-fibrosis, ukwanda kwezicubu ezithintekayo esikhundleni se-hepatocytes efile. Ngakho-ke, kuthuthukisa ukusebenza kwesibindi futhi kuvikele izinguquko ezingenakuphikwa - i-cirrhosis kanye nomdlavuza wesibindi. Njengama-hepatoprotectors amaningi, i-Phosphogliv inomphumela we-antioxidant.
Uma kuqhathaniswa nePhosphogliv, uCarsil isidakamizwa esidala. Lesi sidakamizwa besaziwa kusukela iSoviet Union, senziwa eBulgaria. I-Karsil ikhophi eshibhile yesidakamizwa i-Legalon (ukulungiswa kwasekuqaleni kwe-silymarin) futhi, ngokungafani nayo, iqukethe umthamo wethamo lesigamu se-silymarin - 35 mg, esikhundleni se-70 mg noma i-140 mg ye-Legalon.
Kuyinto hepatoprotector enezinto ezilwa nokuvuvukala nezokulwa namagciwane. Izithako zayo ezisebenzayo yi-glycyrrhizic acid nama-phospholipids abalulekile. Izinhlobo zezindlela zokukhishwa - amakhompiyutha kanye ne-lyophysilate yokulungiswa kwesisombululo sokuphathwa kwe-intravenous.
Ama-phospholipids athuthukisa i-lipid metabolism, andise umsebenzi wokudonswa kwesibindi, futhi ungavumeli ukwakheka kwezicubu ezixhunyayo kuwo.
I-Sodium glycyrrhizinate inezinto ezilwa nokuvuvukala, yehlisa izinga lokuzala kwegciwane esibindini, ngoba umsebenzi wamaseli ababulalayo uyanda. Izici ze-hepatoprotective ze-glycyrrhizic acid zibangelwa umphumela we-antioxidant.
ukulimala kwesibindi esinobuthi notshwala,
Ukonakala kwamafutha kwesibindi,
i-psoriasis, i-cirrhosis, i-hepatitis yegciwane.
ukuzwela ngokweqile ezintweni zomkhiqizo,
Ngokuqapha, umuthi kufanele uthathwe ngabantu abane-arterial and portal hypertension.
I-Phosphogliv ngokuqapha kufanele ithathwe ngabantu abane-hypertension ye-arterial and portal.
Imvamisa, i-Phosphogliv ibekezelelwa kahle, kepha uma kuqhathaniswa nesizinda sokuphatha kwayo, imiphumela elandelayo emibi kwesinye isikhathi iba:
ukuqhuma kwesikhumba, ukukhwehlela, i-conjunctivitis, ubunzima bokuphefumula kwamakhala,
i-edema yangaphakathi, ingcindezi ekhuphukayo,
ukungaphatheki kahle kwesisu, ukugcotshwa kwemizwa, isicanucanu, ukubopha.
Lapho umuthi ufakwa ngemithamo emikhulu, kubhekwa umphumela we-pseudocorticosteroid, ohambisana ne-edema kanye nokwanda komfutho wegazi.
Isebenza kanjani i-Essliver Forte
Le yi-hepatoprotector, izakhi eziphambili zazo ezibalulekile ezingama-phospholipids, i-nicotinamide, i-alpha-tocopherol acetate, amavithamini B1, B2, B6, B12, E, PP. Kutholakala emaphaketheni. Umuthi ulawula i-biosynthesis ye-phospholipids, ubuyisela ukwakheka kwama-hepatocytes, uthuthukisa izakhiwo ze-bile. Njengoba unesifo sikashukela, kwehlisa i-cholesterol yegazi kahle.
Izinto ezisebenzayo zinezakhi ezilandelayo:
Vitamin B1 - ubandakanyeka ekudleni kwama-carbohydrate,
Vitamin B2 - ithuthukisa ukuphefumula kwamaselula,
I-Vitamin B6 - ebandakanyeka kumzimba wamaprotheni,
I-Vitamin B12 - iyadingeka ekuhlanganiseni kwama-nucleotides,
IVitamin PP - ibamba iqhaza ezinqubweni zokuphefumula kwezicubu, i-carbohydrate kanye nokudla okunamafutha,
Vitamin E - inomphumela we-antioxidant, ivikela ulwelwesi ku-lipid peroxidation.
ukwephulwa kwe-lipid metabolism,
imisebe noma ukulimala kwezidakamizwa esibindini,
ukulimala kwesibindi okubangelwa utshwala noma ukusetshenziswa kwezidakamizwa,
Ukuxhumana kuncintisana nokuzwela ngokweqile kwezinto ezisetshenzisweni zokwakheka komkhiqizo. Ukuvela komzimba kanye nokungaphatheki kahle esifundeni se-epigastric kwesinye isikhathi kungenzeka.
Ukuqhathaniswa kwePhosphogliv ne-Essliver Forte
Ukuthola ukuthi yisiphi isidakamizwa esisebenza kangcono - i-Phosphogliv noma i-Essliver Forte, udinga ukuziqhathanisa.
Zombili lezi zidakamizwa zijwayeze isibindi. Basiza ukukhipha ubuthi obufaka ubuthi esithweni, bandisa ukumelana kwamaseli wesibindi ezintweni ezilimazayo, basheshise ukubuyiselwa kwesakhiwo sezicubu zesibindi. Ukwenziwa kwamalungiselelo kufaka ama-phospholipids, ngosizo lawo mangqamuzana ahlukane futhi andiphindaphindeke, kanti nezakhi ezidingekayo ekwakhiweni kwezitho zokuthambisa hepatocyte zithuthwa. Imithi ibekezelelwa kahle.
I-Essliver Forte ine-contraindication ezimbalwa, futhi mancane amathuba okubangela imiphumela emibi.
Yini engcono - Phosphogliv noma Essliver Forte?
Yisiphi isidakamizwa esingcono okufanele sinqunywe ngudokotela, kucatshangelwa izici zomzimba wesiguli kanye nobunzima besifo. Kwi-Phosphogliv, ama-phospholipids ayakwazi ukuqinisa isenzo se-glycyrrhizic acid, okwenza umuthi ube ngaphezulu kwe-bioava futhi ngakho-ke usebenza kahle. I-Essliver iqukethe amavithamini e-B, adingekayo ukuze isibindi silawule ukwakheka kwamaprotheni, amafutha nama-carbohydrate. Kepha abanye abantu bane-allergic kubo, futhi nge-overdose, i-hypervitaminosis iba khona.
UMikhail, oneminyaka engama-56, uKaliningrad: “Ngangihlala ngikuthanda ukuphuza, kodwa kwaqala ukungiphazamisa. Ngaphezu kwesifo senhliziyo, bekunezinkinga ngesibindi. Izikhathi ezithile, ukuvela kancane nosizi ohlangothini kwaqala ukwenzeka. Udokotela watusa ukuthatha inkambo yesidakamizwa i-Phosphogliv. Wasiza ngokushesha: Ngazizwa ngingcono, zonke izimpawu ezingezinhle zahamba. ”
UNadezhda, oneminyaka engama-33, uVoronezh: “Isikhathi eside ngangifuna umuthi osebenzayo futhi ongabizi kakhulu we-psoriasis. I-Essliver Forte yaphenduka inketho engcono kakhulu. Inkambo yokwelashwa yayithatha isikhathi eside ngaphambi kokuvela kwemiphumela yokuqala, kepha ngiyaneliseka. "
Ukubuyekezwa kukadokotela kuPhosphogliv naku-Essliver Forte
U-Alexander, oneminyaka engama-51, uchwepheshe wezifo ezithathelwanayo, eMoscow: “I-Phosphogliv isidakamizwa esisebenzayo esiphatha kahle i-hepatitis egulisayo futhi isiza nezifo zesibindi. Isithako sayo esisebenzayo sandisa ukuvikelwa kwama-antiviral. Kuyaqabukela, umuthi ubangela ukungezwani komzimba. Okuwukuphela kwensizakalo yayo yindleko ephezulu. ”
UDmitry, oneminyaka engama-45, isazi se-hepatologist, uYaroslavl: “Ngivame ukusebenzisa i-Essliver Forte engikwenzayo. Umuthi usiza ukuguquguquka kwesibindi nokusebenza kwesisu. Akuvamile ukudala ukusabela okubi komzimba futhi kukhombisa ukusebenza kahle kakhulu. "
I-Phosphogliv noma i-Carsil - okungcono?
Isikhombi Phosphogliv Karsil
- i-lyophilisate yokulungiswa kwekhambi lomjovo
- amaphilisi (Carsil Forte)
Amafutha hepatosis nezinye izilonda zesibindi eziwohlokayo,
Izilonda zokwelapha nesinobuthi zesibindi,
Njengengxenye yokwelapha okuyinkimbinkimbi:
I-viral hepatitis (esibuhlungu nesingamahlalakhona),
- ukulimala kwesibindi esinobuthi,
- I-hepatitis engamahlalakhona ye-etiology engekho-viral,
- Isibindi i-cirrhosis (njengengxenye yokwelashwa okuyinkimbinkimbi),
- isimo ngemuva kwesibindi esibuhlungu,
- ukuvimbela ukusetshenziswa kwezidakamizwa isikhathi eside, utshwala kanye nokudakwa okungapheli (kufaka phakathi uchwepheshe).
- ukukhulelwa nokuqunjelwa
Ukungabekezeleleki kwezakhi zomuthi
Isikhathi sokudakwa kakhulu
Ukhipha izimpawu futhi kuthinte i-pathogeneis (mshini), futhi imbangela yezifo zesibindi.
I-Membrane stabilizer, antioxidant, i-ejenti elwa nokuvuvukala. Ivimbela ukuthuthukiswa kwama-fibrosis kanye nama-tumors wesibindi, kuthinta kahle isimo sesikhumba. Ngokuvamile yi-ejenti enezimpawu, i-antioxidant esebenza kahle uma kwenzeka unobuthi.
Futhi-ke, i-Phosphogliv noma i-Carsil? Lawa mathebula akhombisa ukuthi ekuqaleni, i-Carsil nePhosphogliv zilingana - zombili ziyasebenza futhi ziphephile, ngoba okwenziwe ngezinto zemvelo zokusetshenziswa. Kodwa i-Phosphogliv ehlangene inomphumela oyinkimbinkimbi.
Ngokungafani neCarsil, ithinta imbangela nakho konke ukuxhumana okuyinhloko kwezifo zesibindi. Ngaphezu kwalokho, iyasebenza ezifweni zesikhumba, futhi esihlupheka nge-hepatic pathology.
Yini engcono - Phosphogliv noma Carsil? Impendulo isobala - Phosphogliv. Yiba nempilo!
? ”, Engaqondakali. Odokotela bavame ukusho ukuthi akunakwenzeka ukusho ukuthi yisiphi isidakamizwa esingcono; bangabhekwa kuphela njenge-ejenti ephumelelayo yokwelapha esimweni ngasinye. Ngakho-ke, kunikezwa imithi ehlukile yezifo ezahlukahlukene zesibindi. Futhi, impela, le mishanguzo emibili inezimpawu ezihlukile, amanani, nezimpawu zenkambo yokwelashwa. Kepha kunezinhlangothi ezifanayo ezihlanganisa izidakamizwa.
Ukuhlukahluka phakathi kwalezi zidakamizwa zombili
Lapho ufuna izimpendulo zemibuzo enjengokuthi: “Yini engcono kune-Phosphogliv noma i-Essential Forte?” Kubalulekile futhi ukunquma umehluko phakathi kwale mishanguzo emibili. Okokuqala, kufanelekile ukuqaphela umehluko olandelayo ezimeni, emikhakheni nasezimpawu zemithi emibili yesibindi:
Isikhathi senkambo yokwelapha sehlukile. Konke kuncike esigabeni sesi sifo, isimo saso, izinga lokunganakwa, isimo esejwayelekile kanye nokusabela okukhethekile kwesiguli.
Umehluko usesimweni sezakhi ezisebenzayo ezisizayo ezikhona kuzo zombili lezi zidakamizwa. Isibonelo, ukuqoqwa okuhlukile kwe-glycyrrhizic acid, ekhishwa ku-licorice.
I-Essentiale ilungele kakhulu abesifazane abakhulelwe kunePhosphogliv.
I-Phofogliv ine-satellite enkulu nokuqoqwa kwezinto ekwakhekeni kwayo, ngakho-ke inemiphumela emibi eminingi.
Naka! I-Glycyrrhizic acid iyafana ngezakhiwo ezenzweni zamahomoni athile akhiqizwa yizindlala ze-adrenal. Ngakho-ke, izidakamizwa eziqukethe into enjalo kumithamo egxile ingadidaniswa kalula nezidakamizwa ze-hormonal. Ngemuva kwakho konke, zithinta kakhulu amandla ezinga lama-hormone athile. Ngakho-ke, kumithamo emikhulu, i-hepatoprotectors enjalo kufanele ithathwe ngokucophelela okukhulu, kucatshangelwa izincomo zikadokotela, ukubonisana naye mayelana nama-hormone athile kanye nengozi yemiphumela emibi.
Izici ezivamile zezidakamizwa ezimbili
Ngokujwayelekile, umbono ungakhiwa futhi ukuthi yikuphi ukukhetha ukwenza kangcono, uthenge i-Essentiale yesibindi sakho, noma i-Phosphogliv kufanelekile.
Ingxube yama-phospholipids iyingxenye yezakhi ezisebenzayo zazo zombili lezi zidakamizwa.
Uhlobo lokukhiqiza luyahlangana.
Bathola ingxube yama-phospholipids ngendlela efanayo - kusuka ezintweni ezingavuthiwe ze-soya. Ngakho-ke, imithi yemvelo, ayinayo i-chemistry noma i-synthetics ebizwayo.
Ingasetshenziswa njengama-ejenti we-immunomodulatory agents.
Avikela amaseli wesibindi ekubhujisweni kwe-pathogenic, enza ubuthi bube namandla emzimbeni osungene emzimbeni.
Bakha izithiyo ekwandeni okungafuneki kwezicubu esibindini, ezenza umsebenzi oxhumekile.
Babuyisela isibindi ngemuva kwezifundo ezinzima zokwelashwa ngamakhambi anamandla, ama-cytostatics.
Yehlisa inqubo yokuvuvukala ekuphazamisekeni kwesikhumba.
Ngokubheka ukubuyekezwa kwezidakamizwa ezimbili ezivela kwabanye ochwepheshe abaphambili ekwelashweni kwezifo zesibindi, singaphetha ngokuthi akunakwenzeka ukusho ngokungananazi ukuthi umuthi owodwa ungakhethwa yini ngoba ungcono noma mubi kakhulu.
Isibonelo, Okubalulekile kuvame ukunqunywa ngokunembile lapho kudingeka umthamo owengeziwe wama-phospholipids ekwelashweni ukwelashwa kwanoma yiluphi uhlobo lwesifo sesibindi. Kodwa iqiniso lokuthi lesi sidakamizwa silungele zonke izinhlobo ze-hepatitis liyisiqinisekiso sesenti.
Kepha i-Phosphogliv ilungele lapho kudingeka ukumisa ukuthuthukiswa kwamafayibha e-fibrous ezicutshini ezithintekayo zesibindi esinegciwane, kanye nokubukeka kwesimo segciwane se-hepatic disorder.
Kuvame ukubekelwa i-hepatitis C, lapho kudingeka khona ukuthola umphumela wokwelapha nge-normalization ye-biochemistry yezinhlelo zangaphakathi zomzimba. Phakathi kodokotela, kuyamukelwa ngokuvamile ukuthi lo muthi uyindlela ethuthukisiwe ye-Essentiale edumile. Ngakho-ke, ukuqokwa kwayo kweziguli kuhlale kwenziwa ngokunakekelwa okukhulu phakathi kochwepheshe.
I-Essliver nayo iyi-ejenti ye-hepatoprotective. Ijwayelekile umsebenzi wama-hepatocytes. Ama-phospholipids kanye nama-vitamin supplements afakwe ekwakhiweni abuyisela amaseli wesibindi. Banomthelela ekujezisweni kokuphefumula kwamaselula ngenxa yokulawulwa kokuqalwa kwe-hepatocyte.
I-Essliver isusa imiphumela yezinto ezinobuthi ngemuva kokusetshenziswa kwezidakamizwa, utshwala nemithi.
Imisa ukucekelwa phansi kwe-hepatocytes. Umuthi uphakamisa ukuvuselelwa kabusha kwamaseli wesibindi.
Amavithamini akha umuthi enza lezi zenzo ezilandelayo:
i-thiamine (B1) - isebenza njenge-coenzyme, i-metabolism ye-carbohydrate,
riboflavin (B2) - ejwayelekile ukuphefumula kwe-hepatocytes,
i-pyridoxine (B6) - isebenza ukukhiqizwa kwamaprotheni,
i-cyanocobalamin (B12) - ivuselela ukukhiqizwa kwama-nucleotide,
I-nicotinamide (PP) - ilawula i-carbohydrate kanye nama-metabolism wamafutha, ibuyisela ukuphefumula kwamaselula,
IVitamin E - isusa ubuthi, ivikela isibindi ku-lipid oxidation.
i-hepatitis yemisuka ehlukahlukene,
ukulimala kwesibindi ngenxa yokuchayeka ezintweni ezinobuthi,
ukulimala kwesibindi ngenxa yokuvezwa kwemisebe,
Nge-psoriasis, lesi sidakamizwa sinqunywe ngokuhlanganiswa namanye ama-ejenti, hhayi njengezindlela zokwelapha ezizimele.
Imvamisa, i-Essliver inqunyelwa ukuthathwa ngenkani kwemithi enkulu yezidakamizwa ukuvimbela imiphumela yayo emibi esibindini.
Contraindication nokusetshenziswa kwalesi sidakamizwa ukungabekezelelani ngakunye kwezakhi kanye ne-hypervitaminosis. Kwesinye isikhathi i-Essliver inikezwa abesifazane abakhulelwe lapho bexilonga i-gestosis.
Njengokusabela okuvela eceleni, ukuphazamiseka kwendlela yokuhamba kwamathumbu esiswini, ukuqhuma kwesikhumba, nokulunywa kungenzeka.
I-Essliver inqunyelwe ukuthathwa okuphoqelelwe kwenani elikhulu lezidakamizwa ukuvimbela imiphumela yazo emibi esibindini.
Yini engcono: Phosphogliv noma Essliver?
Ngokusho kochwepheshe, i-Phosphogliv yisidakamizwa esisebenza kahle kunazo zonke ekwelapheni amaseli wesibindi. Ekukhiqizeni kwayo, amazinga e-GMP ayahlonishwa. I-Phosphogliv isohlwini lwemithi ebalulekile.
I-Essliver ikhophi ye-Essentiale. Kuhloswe ngayo ukubuyisela i-hepatocytes, kanti i-Phosphogliv ayigcini nje ngokubuyisela isibindi, kodwa futhi iyiphatha, iqeda imbangela yomonakalo.
Zombili lezi zidakamizwa zisetshenziselwa i-hepatitis kanye ne-cirrhosis, kepha i-phosphogliv nayo inomphumela we-immunomodulating ne-antitumor emzimbeni, ngakho-ke iyasebenza ezifweni zesibindi ezibangelwa amagciwane.
Ngenxa yokuqukethwe kwamavithamini we-B no-E, i-Essliver isetshenziselwa izifo zesibindi ngenxa yokushoda kwama-vithamini kanye nokuqeda ukuvezwa kwemisebe.
Ukuzikhethela kwezidakamizwa kumele kususelwe ezimweni zomzimba wesiguli kanye nesimo sesifo. Uhlobo lokwelashwa kanye nomthamo kunqunywa uchwepheshe.
ULarisa, oneminyaka engama-41, uTula: “Ngenxa yokungondleki kahle, ngaba nokuqina kwesibindi. Udokotela unqume uPhosphogliv. Ngesikhathi esifanayo nokuphuza umuthi, wabuka umsoco ofanele. Ngaya ezinkambisweni zomzimba. Sekuphele izinyanga ezintathu, ngizwa kahle, ngiyaqhubeka nokulandela ukudla. ”
U-Olga, oneminyaka engama-38, uVoronezh: “Umyeni wami uthole ngezinkinga zesibindi esiteshini sokumpontshelwa igazi, lapho aphenduka khona njengomhlinzeki. Ukuhlaziya kukhombisa ukuthi ukwelashwa kuyadingeka. Uphuze inkambo ye-Essliver (izinyanga eziyi-1.5), ngemuva kwalokho waphinda futhi wenza izivivinyo. Konke kujwayelekile. Izindleko zomuthi ziphansi. "
U-Ekaterina, oneminyaka engama-35, uSamara: “Kwaphela iminyaka eminingana ngithola ama-15 kg - ngadla okunamafutha, okuthosiwe. Imayonesi isengezo engisithandayo kuzo zonke izitsha. Ayikho imikhawulo yotshwala nayo. Ngenxa yalokhu, hhayi nje isibalo kuphela esiwohlokile, kodwa futhi nesimo esijwayelekile - isikhumba, izinwele. Bengicabanga ukuthi izinguquko ezihlobene nobudala, kepha zadlula izivivinyo. Udokotela unqume ukudla kanye nePhosphogliv. Kwaba lula ngemuva kwenyanga yokwamukelwa. Ngokusho kokuhlaziywa, isimo sibuyele kwesijwayelekile ngemuva kwezinyanga ezi-4. ”
Ukubuyekezwa kodokotela mayelana nePhosphogliv ne-Essliver
USergey, isazi se-hepatologist, eMoscow: “Ngisebenzisa i- phosphogliv ku-narcology. Umphumela wokwelapha ushesha. Iphumelela ngokumelene ne-hepatitis viral kanye ne-genesis ethelelekayo. Emsebenzini wami, kwakungekho amacala okubekezelelwa kwezidakamizwa. Okubi kubandakanya izindleko eziphakeme zemijovo. "
UDaria, isazi sezinzwa, uSaratov: “I-Essliver isetshenziselwa ukwelapha izilungiselelo zombili ezingalalisiwe nezeziguli. Ibuyisa amaseli wesibindi futhi inomphumela omuhle emgodini wokugaya ukudla. Uma kuqhathaniswa nezidakamizwa ze-analogue, akubizi. ”
Uyini umehluko phakathi kwePhosphogliv ne-Essliver?
Zombili lezi zidakamizwa zingamalungu eqembu elifanayo lezidakamizwa, ekwelapheni nasekuvikelweni kwesibindi - i-hepatoprotectors. Yize zombili lezi zidakamizwa ziqukethe ama-phospholipids abalulekile ekwakhekeni kwawo, kusekhona umehluko osisekelo phakathi kwePhosphogliv ne-Essliver. Kepha okokuqala, ngalokho okuhlanganisa - mayelana nama-phospholipids abalulekile.
Ama-phospholipids abalulekile afakwa ezingxenyeni zamaseli wesibindi - ama-hepatocytes futhi alungisa izingxenye ezilimele ze-membrane yeseli (ulwelwesi). Okusho ukuthi, babuyisela isibindi. Kepha ukuvuvukala uqobo akususwa. Le mpahla inento nje ehlukanisa i-Phosphogliv ne-Essliver.
I-Phosphogliv ekwakhiweni inengxenye yesibili esebenzayo - i-glycyrrhizic acid, emane inomphumela wokulwa nokuvuvukala, futhi inomphumela we-antioxidant kanye ne-antifibrotic. Ama-phospholipids akhulisa umphumela we-glycyrrhizic acid, okwenza ukuthi i-Phosphogliv ibe ngaphezulu kwe-bioavava futhi, ngenxa yalokho, isebenze.
Izinto ezisizayo ze-Essliver ngamavithamini e-B. Asiza isibindi ekuphatheni ukwakheka kwamaprotheni, amafutha kanye nama-carbohydrate. Kepha abanye abantu bayayangana nalawo mavithamini, futhi angaphezu kwalokho anele ekudleni kwabo, ngakho-ke kufanele uphathe ngokucophelela ukwelashwa kwe-Esslyver.
Into esemqoka esebenzayo
- phospholipids ebalulekile
Ukonakala kwesibindi esinamafutha (i-hepatosis), utshwala, ubuthi, okubandakanya ukwelashwa, ukulimala kwesibindi,
Njengengxenye yokwelapha okuyinkimbinkimbi kwe-hepatitis viral (acute and chronic), i-cirrhosis kanye ne-psoriasis.
- Ukonakala kwamafutha kwesibindi
- I-hepatitis eyingozi futhi engamahlalakhona, i-cirrhosis
- ubuthi, ukudakwa kwezidakamizwa
- hypersensitivity kuzakhi zomuthi,
- isikhathi sokukhulelwa nokuncelisa,
- ubudala ukuya eminyakeni eyi-12.
- hypersensitivity kuzakhi zomuthi
- ukwanda kwengcindezi yegazi
- ukungakhululeki kwesisu
- umuzwa wokungakhululeki esifundeni se-epigastric
Ukuhlangenwe nakho komuntu siqu kweziguli ezisebenzisa i-Phosphogliv noma i-Essliver kunganikeza isithombe esicacile sokusebenza kwale mishanguzo.
Yini engcono uPhosphogliv noma i-Essliver?
I-Phosphogliv isidakamizwa sokuqala sokwelapha isibindi. Kukhiqizwa ngokuhambisana nazo zonke izindinganiso ze-GMP (Okuhle Kwenziwe Ngokwezifiso) - kuyindlela yamazwe omhlaba yezinkambiso, imithetho kanye nemihlahlandlela yokwenziwa kwemithi.
I-Essliver iyi-generic (ikhophi) yokulungiswa kwe-Essentiale equkethe amavithamini we-v. B, ngenkathi ikhophi ibiza okufanayo nomuthi wokuqala we-Phosphogliv .. U-Phosphogliv umuthi “ofanelekile”. Lesi kuphela isidakamizwa sokwelashwa kwezifo zesibindi, esifakwe ohlwini lwemithi ebalulekile futhi ebalulekile, futhi inhlanganisela yezinto zayo efakiwe ezindinganisweni zokunakekelwa kwempilo. Ngokungafani ne-Essliver, elilungisa kuphela amaseli alimele, uPhosphogliv uphulukisa ngokushesha futhi alungise. Izenzo ezimbili ngokumelene neyodwa.
Yini enye ephumelela kakhulu i-Phosphogliv noma i-Essliver?
I-Phosphogliv ukuphela kwe-hepatoprotector enomphumela wokufakazela ukumelana nokuvuvukala. Okusho ukuthi, ukusebenza kwayo akukuphakamisi noma yikuphi ukungabaza njengoba kuye kwahlolwa izivivinyo zemitholampilo nezindlela eziningi ezenziwa ngazo.
Ngeshwa, akunakwenzeka ukuthola idatha ethembekile ezifundweni zemitholampilo zezenzo ze-Essliver kwimithombo evulekile. Ngakho-ke, okwamanje, ungagxila kuphela kuzibuyekezo ezishiywa ngabasebenzisi kunethiwekhi.
Lapho ukhetha i-Phosphogliv noma i-Essliver, kufanele usethembele umuthi wokuqala, osedlule ekuvivinyweni kwesikhathi, unephrofayili yokuphepha evumayo nezibuyekezo ezinhle kakhulu ezivela kubasebenzisi abaningi.